CU Dawei Friends :: Your first category :: ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဥာဏ်စမ်း ..
Admin on Sun Aug 14, 2011 9:34 pm
မေးခွန်း (၁) သင်ပါဝင်တဲ့ အပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာ နံပါတ်(၂)ကို သင်ဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီဆိုရင် သင်ဟာနံပါတ် ဘယ်လောက်မြှောက်...လဲ?
အဖြေ နံပါတ် (၁) လို့ ဖြေခဲ့ရင် သင့်အဖြေဟာ မှားသွားပါပြီ။ နံပါတ် ၂ကိုပဲ ဖြတ်ခဲ့တာလေ... နံပါတ် ၂ နေရာကိုပဲ သင်ရမှာပေါ့။ အဖြေ နောက်ကရေရင် ဒုတိယလို့ သင်ဖြေအုန်းမလား? ဒါဆိုရင် မှားပြန်ပြီနော်။ နောက်ဆုံးလူပါဆိုမှ သင်ဘာဖြစ်လို့ နောက်ဆုံးကို ပြန်ပြေးချင်ရသလဲ?
အားလုံးအတွက် အပျင်းပြေလေးပါ။ အားလုံးတော်ကြပါတယ်။ တပျော်တပါး ဝင်ဖြေကြတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဖြေမှန်သူ၊ မမှန်သူများ စားမယ်ဝါးမယ်မှာ ကြိုက်တာ ဝင်စားနိုင်တဲ့အကြောင်း....း)